के हस्तमैथुन समस्या हो ? - ♣भिडियो जुलुम♣
Homeमनोरन्जनके हस्तमैथुन समस्या हो ?
म २२ वर्षीय अविवाहित पुरुष हुँ । मेरो समस्या हस्तमैथुन हो । मैले विगत नौ वर्षदेखि दैनिक रूपमा हस्तमैथुन गर्दै आएको छु । के हस्तमैथुन गर्नाले शारीरिक कमजोरी हुन्छ ? के धेरै हस्तमैथुन गर्दा सन्तान जन्माउन सकिँदैन ? यो समस्याबाट छुट्कारा पाउने उपाय के हो ? हस्तमैथुन गर्दा वीर्य नष्ट हुन्छ ? कतै मेरो शारीरिक कमजोरीको कारण हस्तमैथुन त होइन ?
आफैंले यौनाङ्ग चलाउने वा दबाउने जस्ता क्रियाकलाप गरेर यौन आनन्द प्राप्त गर्ने यौन क्रियाकलाप नै हस्तमैथुन हो । यौन आनन्द प्राप्त गर्ने उपायहरूमध्ये यौन अङ्गको घर्षण प्रमुख हो । सिद्वान्तत: सम्भोग गर्दा र हस्तमैथुन गर्दा यौन अङ्गको घर्षणबाट यौन आनन्द प्राप्त हुने प्रक्रिया तथा मानव यौन प्रतिक्रिया चक्र उस्तै हो । त्यसैले सम्भोग गर्दा हानि हुँदैन तर हस्तमैथुन गर्दा हानि हुन्छ भन्न मिल्दैन । त्यसैले हस्तमैथुनलाई समस्या भन्न मिल्ने कुरै भएन । हस्तमैथुनलाई समस्याका रूपमा लिनु मनासिव होइन, किनभने यो एउटा स्वाभाविक यौनप्रक्रिया हो ।
पक्कै होइन । धेरै शारीरिक परिश्रम गर्दा थकाइ लाग्छ । सामान्यत: हस्तमैथुन गर्दा यस्तै ३ देखि ६ क्यालोरी प्रतिमिनेट खर्च हुन्छ । दौडिँदा यस्तै १४ देखि १८ क्यालोरी प्रतिमिनेट, भर्‍याङ चढ्दा यस्तै १२ देखि १४ क्यालोरी प्रतिमिनेट खर्च हुन्छ भने पौडी खेल्दा १० देखि १२ क्यालोरी प्रतिमिनेट खर्च हुन्छ । यसरी तुलना गरेपछि तपाईंले पक्कै थाहा पाइसक्नुभयो होला कि हस्तमैथुन एक विशेष क्रियाकलाप भए पनि यसमा त्यति धेरै शक्ति अर्थात् क्यालोरी खर्च हुँदैन र यसलाई नै थकाइ लाग्नु वा कमजोरीको मुख्य कारण मान्नु मनासिव हुँदैन । बरु थकाइ लाग्ने वा कमजोरी अनुभव हुने अन्य कुनै कारण त छैन भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी लामो समयसम्म थकाइ लगाउने कारणहरूमा रक्तअल्पता, निराशा, चिन्ता, खानासम्बन्धी एलर्जी, ह्दयरोग, मधुमेह, निदाएको बेला सास रोकिने अवस्था, थाइराइड आदि हुन सक्छन् । यसमा हस्तमैथुनलाई दोष दिनुभन्दा चिकित्सकलाई देखाई उचित उपचार गराउनु बेस होला ।
बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा हस्तमैथुनले स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै हानि–नोक्सानी गर्दैन भन्ने नै हो । तपाईंको हकमा अनावश्यक रूपमा चिन्ता नगर्नु वा हिनताबोध नलिनु नै समाधानको बाटो हो । कतिपय स्थानमा यस्ता प्राकृतिक यौन क्रियाकलापको उपचार गर्ने चलन छ, जसको फाइदा उपचार गराउनेलाई मात्र हुन्छ ।
राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी सिपोरा गुरुङसँगको अन्तर्वार्ता